အမေးအဖြေများ - Ningbo Artmetal ကုန်ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ
နက်ရှိုင်းပုံဆွဲမယ့်စာရွက်သတ္တုအလွတ် radial လာကြတယ်များ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုကဖွဲ့စည်းသေဆုံးသို့ရေးဆွဲသောတစ်စာရွက်သတ္တုဖွဲ့စည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏အတိမ်အနက်ကိုယင်း၏အချင်းထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ "နက်ရှိုင်းသော" ပုံဆွဲစဉ်းစားသည်
ပစ္စည်းများ၏အဘယျအမျိုးအစားများနှင့်အတူ ARTMETAL အလုပ်သလော
နက်ရှိုင်းပုံဆွဲသည်, ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြပြီးလုပ်ငန်းများ၌နီးပါးအားလုံးစီးပွားဖြစ်သတ္တုနက်ရှိုင်းပုံဆွဲဘို့စာရွက်သို့မဟုတ်ကွိုင် form မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့အဓိကပစ္စည်းသံမဏိ 200-400 စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပစ္စည်းများကို CRS, နာရီ, လူမီနီယံကြေးဝါကြေးနီလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
အတူပစ္စည်းထူ ARTMETAL အလုပ်ဘာတွေလဲ?
( ".375 ဖို့" 004) 9.525 မီလီမီတာမှ 0,1016 မီလီမီတာ
အောင်မြင်ရန်အဘယ်အရာကိုသည်းခံစိတ် ARTMETAL နိုင်မလဲ?
သေနှင့်အလယ်တန်းစက်ပေါင်းစပ်အားဖြင့်ငါတို့သည် .00254 မီလီမီတာ (.0001 ") မှသည်းခံတက်ပေးနိုငျ
နှိပ်, တူးဖော်ခြင်း, ဂဟေဆော် (TIG, MIG, အစက်အပြောက်), Pem, လုံး, လူကြိုက်များ INSERT, riveting, စုဝေး Electro-ပိုလန်, စက်မှုချော (hairline, မှန်), အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း, သဲပေါက်ကွဲမှု, passive, များတွင်လည်းကောင်း
အဘယ်သို့ငါ quotation အရနိုင်မလဲ?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို2အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းသင်သည်ပူဇော်မည်, ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်နှင့်အတူရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာသို့မဟုတ်ပင်မူကြမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကို RFQ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုရေးဆွဲအတူအလုပ် ARTMETAL နိုင်မလဲ?
JPG, PDF ဖိုင်ရယူရန်, DWG, DXF, အဆင့်, IGS, ETC ။
အဆိုပါ ARTMETAL ရဲ့ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုကဘာလဲ?
T / T, L ကို A / C, D ကို / P ကိုအနောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စု, etc ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုနှင့်ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိရန်ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်အေးဂျင့်ကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့်၏နာမ၌ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ (ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကလှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်မှုနှင့်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဖြစ်ပါသည်) နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ရပ်ခြားဖောက်သည်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
ဘယ်လိုအရည်အသွေးအာမခံချက် Artmetal နိုင်မလဲ?
Artmetal State-Of-The-Art စက်တွေတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်ထုတ်လုပ်မှုခြေလှမ်းဂရုစိုက်ဖို့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ, အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကရှိပါတယ်, certified ရရှိထားပြီး ISO9001 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပြဿနာရှိပါကကျနော်တို့ပြင်ပေးသို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သင့်ငွေပေးချေမှုကိုပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။